ताप्लेजुङमा ‘लिम्बू सङ्ग्रहालय’, किन ओझेलमा ? «
ताप्लेजुङमा ‘लिम्बू सङ्ग्रहालय’, किन ओझेलमा ?
प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७५, आईतवार २२:०८
ताप्लेजुङ/ लिम्बू जातिको पहिचान झल्काउने सामग्रीसहितको लिम्बू सङ्ग्रहालय प्रचार–प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ । सदरमुकाम फुङलिङदेखि १३ कोष उत्तरपूर्वमा रहेको मामाङ्खेमा २०५७ सालमा सङ्ग्रहालय स्थापना भएको सङग्रहालय प्रचार–प्रसार तथा उचित व्यवस्थापनको अभावमा ओझेलमा परेको हो ।
१८१४ र १८३१ मा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बूहरूसँग गरेको सम्झौता र युद्धमा प्रयोग गरिएको ढालहरूलाई सङ्ग्रहालयमा संरक्षण गरेर राखिएको छ । सय वर्षअघि फेदाङ्वा/विजुवाहरूले प्रयोग गर्ने जामा, पगरीहरू पनि सो सङ्ग्रहालयमा हेर्न पाइन्छ । लोप हुन लागेका लिम्बू जातिले जम्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कारमा प्रयोग गर्ने दुई सयभन्दा बढी सामग्री राखिएको छ । ‘हामीले यो सङ्ग्रहालयमा लिम्बू समुदायले प्राचीन कालमा प्रयोग गर्ने सामग्रीहरूलाई सङ्कलन गरेर राखेका छाैं’, सङ्ग्रहालय व्यवस्थापन समितिका एक सदस्य टीका मावोले भने, ‘अझै पनि धेरै सामग्रीहरू सङ्कलन गर्न सकेका छैनौं ।’ यो लिम्बू जातिको पहिचान बोकेको एक मात्र सङ्ग्रहायल भएको दाबी गरिन्छ ।
हालसम्म स्थानीयले नै संरक्षण गरिरहेका छन् । सङ्ग्रहालय कञ्चनजङ्घा हिमाल जाने पदमार्गमै पर्छ । यातायातको पहुँच नपुगेको दुर्गम गाउँ भएकाले यहाँ खासै अवलोकनकर्ताहरू पुग्न सकेका छैनन् । ‘यातायातको साधन हाम्रो गाउँसम्म आइपुगेको छैन् ।’ मावोले भने, ‘यसैले गर्दा पनि पैदल धाएर अवलोकनकर्ताहरू आउँदैनन् । प्रचार–प्रसारमा पनि कमी भएकाले पनि होला अवलोकनकर्ता नगन्य मात्रामा आउँछन् ।’ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको बिकट मानिने यस वडामा अहिलेसम्म सडक सञ्जालले जोडिएको छैन ।
यहाँसम्म सडक निर्माण र प्रचार–प्रसार भएमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू बढ्ने स्थानीयको अपेक्षा छ । समितिले अहिले सङ्ग्रहालयको प्रवद्र्धनका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस वर्ष वडा कार्यालयबाट विनियोजन भएको ८० हजारले ब्रोसर बनाएर प्रचार गर्ने समितिको योजना छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि तीन तहका सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘यस सङ्ग्रहालयको प्रर्वद्धन तथा प्रचार–प्रसारका लागि हामीले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने योजना छ ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले भने, ‘लिम्बूहरूको एतिहासिक तथा पूरातात्विक महत्व बोकेको सङ्ग्रहालयलाई प्रर्वद्धन गर्ने कुरामा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ ।’ इतिहास र संस्कृतिको अध्ययनकर्ताहरूको लागि पनि लिम्बू सङ्ग्रहालय उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्ने युवा विद्यार्थी प्रजीन हाङ्वाङ बताउँछन् । मामाङ्खेसम्म पुग्ने सडक निर्माण भएमा कञ्चनजङ्घा हिमाल जाने पर्यटकको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि हुने स्थानीयको अपेक्षा छ ।